Garment Sector Hopes to Resume Importing Chinese Raw Materials | Myanmar Business Today
Home Business Local Garment Sector Hopes to Resume Importing Chinese Raw Materials
Garment Sector Hopes to Resume Importing Chinese Raw Materials
The coronavirus outbreak in China, from where Myanmar imports most of its raw materials for the garment sector, has devastated trade between the two countries and has been especially troublesome for the export-oriented and labor-intensive garment industry.
Garment factories can run on stocked raw materials until the end of March, but the expected supply shortages after March can halt the production and operations of factories resulting in layoffs, Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein said atamonthly meeting between the vice president and local business leaders at UMFCCI on February 22.
“We, as the regional government, are working in collaboration with Union-level ministries to resume imports of raw materials as soon as WHO and the Ministry of Health and Sports giveagreen light,” he said.
Local manufacturers import raw materials mainly from China and the shortages are hurting not only Myanmar but other Asian countries as well, according to the Myanmar Garment Manufacturers Association.
“At the moment, we are running on the raw materials we have in store and have to reduce working hours and working days. We hope that by doing so we can mitigate the impact of this crisis. Otherwise, we will have to lay off some employees or temporarily shut down factories,” said U Myint Soe, president of the association.
There are more than 440 garment factories in Myanmar, run by Chinese, Korean, Japanese and local companies, and altogether they employ around 500,000 workers.
The European Union’s GSP (Generalised Scheme of Preferences), granted to Myanmar in 2013, has contributed to garment exports growth to $1.46 billion in 2015 and $4.6 billion in 2018, with the sector projected to grow to 1,500 garment factories and 1 million workers. Despite reports that the EU is considering revoking GSP benefits for Myanmar, local industry leaders have so far not expressed serious concerns about that possibility.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နောက်ဆက်တွဲရလဒ် အဖြစ် ပြည်တွင်းတွင် အထည်ကုန်ကြမ်းပြတ်လပ်မှုမကြုံခင် အစိုးရက တရုတ်မှပြန်တင်သွင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်
ပြည်တွင်းရှိ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကြမ်းအဓိကတင်သွင်းနေရသည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ပြီး အထည်ကုန်ကြမ်း တင်သွင်းရန်လည်း အခက်အခဲဖြစ်နေသည်။
လက်ရှိရှိထားသည့် ကုန်ကြမ်းဖြင့် မတ်လကုန်အထိ စက်ရုံများလည်ပတ်နိုင်သည့် အနေအထားတွင်ရှိသော်လည်း ယင်းနောက်တွင် စက်ရုံများပိတ်သိမ်းသည်အထိ ဖြစ်လာပါက စက်ရုံလုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်သည့်အကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် UMFCCI တွင် ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယသမ္မတနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောသည်။
“ တချို့လုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက် မလည်ပတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထည်ချုပ်ကုန်ကြမ်းတွေကို စနစ်တကျ အဆင်ပြေတဲ့ ကာလတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ WHO နဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနေပြီးတော့ သဘောတူညီနိုင်မယ့် အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေပြီး ဒီကုန်ကြမ်းတွေကို ပြန်လည် တင်သွင်းနိုင်ဖို့ အတွက်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရလည်း ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် အထည်ချုပ်ကုန်ကြမ်းများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ အဓိက တင်သွင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုကဲ့သို့ အထည်ကုန်ကြမ်းပြတ်လပ်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အခြားသော အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသည့် အာရှ နိုင်ငံများတွင်လည်း ကြုံတွေ့နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ သိရသည်။
“ လက်ရှိမှာတော့ အထည်ချုပ်စက်ရုံအများစုက ရှိတဲ့ ကုန်ကြမ်းပေါ်မှာ လည်ပတ်နေရပြီး အလုပ်ချိန် လျှော့ချမှုတွေ ၊ လုပ်ရက်လျှော့ချမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အဆင်ပြေမယ်လို့ တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရော ၊ ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေရော မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီလိုမှ အဆင်မပြေသေးရင် လုပ်သားအင်အား လျှော့ချတာတွေ လုပ်ပါ့မယ်။ ဒါမှ ကိုရိုနာ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာဗာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် ယာယီပိတ်ပါ့မယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဦးမြင့်စိုးက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း စက်ရုံပေါင်း ၂၆၃ ရုံ ၊ ကိုရီးယား အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း စက်ရုံ ၆၇ ရုံ ၊ မြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း စက်ရုံ ၉၂ ရုံ ၊ ဂျပန် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းစက်ရုံ ၂၀ စုစုပေါင်း စက်ရုံ ၄၀၀ ကျော်ရှိပြီး လုပ်သားအင်အား ၅ သိန်းခန့်ကို အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွက် GSP ခေါ် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးအခွင့်အရေးကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး စတင်ပေးအပ်သည့်နှစ်တွင် အထည်ချုပ်တင်ပို့မှုသည် သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄၆ ဘီလီယံ ဖိုးအထိ တိုးတက်လာရာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ တက်ခဲ့သည်။ လာမည့်ငါးနှစ်တွင် အထည်ချုပ်စက်ရုံအရေအတွက် ၁၅၀၀ အထိ ဖြစ်လာရန်နှင့် လုပ်သားအရေအတွက် ဆယ်သိန်းအထိ ခန့်ထားနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသော်လည်း ယခုနှစ်အတွင်း EU ၏ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ GSP ပေးထားမှုကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းရန်စီစဉ်နေသည့်အတွက် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များက စိုးရိမ်နေကြသည်။
Next articleHotels Aim to Help Guests Travel Lighter